Akwa Ozi! Ọ dịghị onye maara onye You bụ! | Martech Zone
Okporo ụzọ na-eto eto! Ekele maka ụfọdụ ọrụ dị egwu nke ndị ọrụ nkwado anyị, Ahịa na ọkachasị onye isi anyị - Patronpath na-agagharị. Mgbe m chere na sọftụwia dị ka Ọrụ, enweghị nnukwu ihe atụ karịa ịtụ ahịa n'ịntanetị maka ụlọ ọrụ na-ahụ maka nri.
I malitere na Patronpath n'ọnwa Ọgọstụ nke afọ a. Ọrụ ahụ siri ike. Ndi otu anyi gha enweta ihe isi ike ma gha n’iru na ebunye ndi mmadu nsogbu. Nakwa, enwere nsogbu dị na ya ịgbanwe ụfọdụ paradigms na ụlọ ọrụ ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ.
Anyị na ọtụtụ ndị na-ere POS na-ebupụta njikọta n'otu oge site na ntọala POS nke ewuru n'afọ gara aga. Anyị emechaala njikọta nke Enterprise Call Center. Izu a, anyị na-anwale ihu ọhụrụ Onye ọrụ ga-abụ ihe mgbanwe egwuregwu na ụlọ ọrụ ahụ. Anyi adighi ala - anyi na agbakwa oso! Anyị na-gogo onye njikwa akaụntụ mbụ anyị.
Anyị nwere ndị mmekọ anyị na ha na-arụ ọrụ ma na-ejere ndị ahịa ozi si n'akụkụ mba niile na ụwa niile ozi. Iji soro anyị oru ngo, anyị na-ahu nagide a Nchikota Basecamp (ee, NA Basecamp) na Ngwa Google maka obere azụmaahịa.
Mgbe anyị na-eji Outlook n'ime maka email, anyị amalitela ịkekọrịta kalenda iji soro ntinye nke onye ahịa anyị. Anyị na-eji Google Docs ịkekọrịta na imekota na dọkụmentị na akwụkwọ ntanetị. Nke a nwere uru dị ukwuu karịa izipu mpempe akwụkwọ site na email ma na-anwa idebe ha niile.
Akwụkwọ Google bụ ngwakọta nke wiki na Microsoft Office niile n'otu. Nwere ike ekenye ndị mmadụ si n'ime ngalaba gị ma ọ bụ na mpụga nke ngalaba gị site na ilele na njikọta njikọ nke nnweta. Anyị enweghị ụlọ ọrụ 10 na-erughị akwụkwọ - nwere nyocha na akụkọ ntolite na nke ọ bụla. Ọ bụ nnukwu akụ na-adị m njikere ịrụ na ụlọ ọrụ ọ bụla. Nwere ike ịnwe mkparịta ụka ederede na ntanetị.
Have nụla banyere ngwa Google?
Ya mere… ọ bụ ụfọdụ akụkọ na-atọ ụtọ taa NPD mara ọkwa na 73% nke folks amaghị na Google Docs dịrị. 94% amaghịdị na enwere ebe nrụọrụ weebụ na-emepụta ihe. Folfọdụ folks n'ime desktọọpụ ụlọ ọrụ na-enwe obi ụtọ - ụfọdụ kpọrọ ya ọnwụ Web App.
Maka ndị nke us n'ime na Software dị ka a Service ụlọ ọrụ, stats ndị a na-amụmụ ọnụ ọchị na ihu anyị. Ikekwe obụna akwa. Onweghi onye matara na anyị nọ ebe a - mana anyị na eto. Anyị anaghị eto eto, anyị na-agbawa.
Ka anyị lelee nke a n'ụzọ dị iche.
Ndi 73% kwuru na ha maara maka akwụkwọ Google mana ha ejighi ya? Nope.
Ndi 94% kwuru na ha maara banyere ngwa arụpụta ihe n'ịntanetị mana ha ejighị ya? Nope.
Ha kwuru na ha anụtụbeghị banyere ya. Oh nwa nwoke!
Ọ bụrụ na ị na-echeghị na nke a bụ ma a rallying oku maka ahịa na ihe ịrịba ohere maka ibu… eleghị anya ị na-arụ ọrụ na desktọọpụ software ụlọ ọrụ. Ọ bụghị ọnwụ, ọ bụ ọmụmụ!
Myirịta dị n’etiti sọftụwia na-arụpụta ọfịs na sọftụwia ndị ọzọ dịka ngwa ọrụ dị. Ọ dịghị onye maara na anyị nọ na mbara igwe, ma. Imirikiti ụlọ oriri na ọ restaurantsụ andụ na agbụ ígwè kwenyere na ha kwesịrị iwu usoro nke aka ha ma ọ bụ dabere na onye na-ere ha POS. Adị m njikere ịkụ nzọ na 99% nke ụlọ ọrụ anyị amaghị na anyị nọ gburugburu.
Anyị na-adabere na ya!
Tags: A Smart agbakomendiumihe di n’imeoyiriDrupalimavexJason OnyekwereJoomlaNkwado ire ahịaSlider
Vidio: Blọọgụ na Bekee nkịtị
Dec 18, 2007 na 11:12 PM
Kwetara. Echere m na ọ bụ ihe nzuzu na ndị mmadụ na-eji nyocha ahụ iji kwupụta ọnwụ nke Office 2.0. Ma buru n'uche na nyocha ahụ ekwughi ihe ọ bụla gbasara mmadụ ole na- iji ọrụ, ma ọ bụ ha kwesịrị.
Dec 18, 2007 na 11:28 PM
Echere m na e nweghị irony na eziokwu na a na ebe nrụọrụ weebụ a na-akpọ "Microsoft Watch" nwere Rome na ndagwurugwu n'akuku a nnyocha e mere. Oke ọchị… ha nụrụ banyere Live Office?
Dee 19, 2007 na 2: 38 AM
Anụbeghị Patronpath na mgbe m gara njikọ ahụ, enwetabeghị m ihe ọ na-eme.
Dee 19, 2007 na 8: 24 AM
Ee, saịtị anyị dị oke egwu! (Emere ya tupu m) Emechara m redesign nke saịtị ahụ ma ọ nọ n'okpuru mmepe ugbu a… anyị nwere ya n'ime izu ole na ole!
Dee 20, 2007 na 2: 21 AM
Veryda na-agba ume! Ọ pụtakwara na anyị ga-arụsikwu ọrụ ike Wrike.com nkwalite n'afọ ọzọ 🙂 Daalụ maka post!